दिपक मनाङेकी श्रीमती पक्राउ मनाङे भन्छन–गल्ती गर्ने कसैलाई छोड्दीन राजाबादी कार्यक्रमको रहस्य के? (भिडियो) – Sanjal Nepal
Homeसमाचारदिपक मनाङेकी श्रीमती पक्राउ मनाङे भन्छन–गल्ती गर्ने कसैलाई छोड्दीन राजाबादी कार्यक्रमको रहस्य के? (भिडियो)
November 30, 2020 admin समाचार 1601
गण्डकी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ उर्फ दिपक मनाङ्गेकी श्रीमतीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । राजीवको श्रीमति दिक्षेन लामालाई मुर्ती चोरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख एसपी सुशीलसिंह राठौरले लामालाई पक्राउ गरेको पुष्टि गरेका छन् । लामालाई जिल्ला अदालत कास्कीको पक्राउ पुर्जी अनुसार मकवानपुरको हेटौंडाबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । मंगलवार ममकवानपुर प्रहरीले पक्राउ गरी लामालाई कास्की पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
लामाले बुहुमुल्य धातुबाट बनेको बुद्ध मुर्ति र केही भाँडा चोरेको आरोप लागेको छ । यस विषयमा सभासद दिपकले भने अनौठो जवाफ दिएका छन् । एक टेलिभिजनमा दिएको अन्तरवार्ताका क्रममा उनले श्रीमतीसंग आफ्नो सम्बन्ध राम्रो नभएको बताएका छन् । उनले श्रीमती विरुद्ध आफै उजुरीमा गएको बताएका छन् । उनले आफ्नो घरवाट पनि श्रीमतीले सामान लिएर हिडेको बताएका छन् । कतिपयले सांसदले नै श्रीमतीलाई अप्ठेरोमा पारेको आरोप समेत लगाएका छन् । यो विषयमा पनि उनले जवाफ दिएका छन् । भिडियो:
November 9, 2020 admin समाचार 3029
November 9, 2020 admin समाचार 5191
November 29, 2020 admin समाचार 1948